RubyCoin စျေး - အွန်လိုင်း RBY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို RubyCoin (RBY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ RubyCoin (RBY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ RubyCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $998 817.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ RubyCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
RubyCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
RubyCoinRBY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.039RubyCoinRBY သို့ ယူရိုEUR€0.0329RubyCoinRBY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0297RubyCoinRBY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0355RubyCoinRBY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.35RubyCoinRBY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.245RubyCoinRBY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.863RubyCoinRBY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.145RubyCoinRBY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0519RubyCoinRBY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.054RubyCoinRBY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.873RubyCoinRBY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.302RubyCoinRBY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.209RubyCoinRBY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.92RubyCoinRBY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.58RubyCoinRBY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0534RubyCoinRBY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0586RubyCoinRBY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.21RubyCoinRBY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.271RubyCoinRBY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.12RubyCoinRBY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩46.26RubyCoinRBY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦15.15RubyCoinRBY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.86RubyCoinRBY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.08
RubyCoinRBY သို့ BitcoinBTC0.000003 RubyCoinRBY သို့ EthereumETH0.0001 RubyCoinRBY သို့ LitecoinLTC0.000647 RubyCoinRBY သို့ DigitalCashDASH0.000382 RubyCoinRBY သို့ MoneroXMR0.000417 RubyCoinRBY သို့ NxtNXT2.79 RubyCoinRBY သို့ Ethereum ClassicETC0.00541 RubyCoinRBY သို့ DogecoinDOGE11.36 RubyCoinRBY သို့ ZCashZEC0.000403 RubyCoinRBY သို့ BitsharesBTS1.48 RubyCoinRBY သို့ DigiByteDGB1.44 RubyCoinRBY သို့ RippleXRP0.126 RubyCoinRBY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00131 RubyCoinRBY သို့ PeerCoinPPC0.138 RubyCoinRBY သို့ CraigsCoinCRAIG17.34 RubyCoinRBY သို့ BitstakeXBS1.62 RubyCoinRBY သို့ PayCoinXPY0.664 RubyCoinRBY သို့ ProsperCoinPRC4.77 RubyCoinRBY သို့ YbCoinYBC0.00002 RubyCoinRBY သို့ DarkKushDANK12.2 RubyCoinRBY သို့ GiveCoinGIVE82.36 RubyCoinRBY သို့ KoboCoinKOBO8.48 RubyCoinRBY သို့ DarkTokenDT0.0359 RubyCoinRBY သို့ CETUS CoinCETI109.8